I-Apartament u Teofila - ngombono wolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDominika
Siyakumema kwiTeofil's Apartment eKoszalin. Indlu epholileyo ilungele uhambo lweshishini kunye neentsuku ezimbalwa zokuphumla kwindawo engaselwandle. Indawo entle - iivenkile ezininzi zegrosari, iinketho zokutyela, indawo yokupaka yasimahla phakathi kweemitha ezingama-200. Ukusuka kwi-balcony kukho i-panorama malunga nesixeko sonke, kunye noLwandle lweBaltic kunye neLake Jamno. Indlu ixhotyiswe nge-intanethi, i-cable TV.
Indawo yokuhlala ibekwe eKoszalin, kumgangatho we-8 we-skyscraper. Ukusuka kwi-balcony kukho umbono omhle wepanorama yaseKoszalin kunye neendawo ezikhangayo ezikufutshane - iPaki yaManzi kunye neHolo lezeMidlalo kunye noLonwabo. Ngeentsuku ezinelanga, umbono ovela kwibalcony unabela elwandle kufutshane neMielno kunye neLake Jamno.
Indlu yahlaziywa ngoJuni 2017. Ixhotyiswe nge-32 ″ yeTV, ithiyetha yasekhaya enesidlali seDVD kunye neefayile zemultimedia, kunye nenethiwekhi yeWiFi enokufikelela kwi-intanethi. Eli ziko linekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji, isitovu segesi, ioveni yemicrowave kunye neseti epheleleyo yezitya.
Kukho iisofa ezi-2 ezisongekileyo kwigumbi lokuhlala - enkulu enobude bokulala obungaphezulu kweemitha ezi-2 kunye nobubanzi obuyi-160 cm, kunye nencinci, i-190 x 140 cm. Abantu abadala aba-2 okanye abantwana abongezelelweyo banokulala. Igumbi lokuhlambela linebhafu kunye nomatshini wokuhlamba.
Kukho iivenkile ezi-4 zegrosari kufutshane nendlu-i-SANO, i-POLO Market, i-Lidl kunye ne-NETTO. Kanye ekungeneni kukho iFamilijny Bar, apho unokutya ukutya okunencasa kunye nexabiso eliphantsi. Kwiimitha ezimbalwa ukusuka apho kukho iPizzeria Gusto.
Indawo efanelekileyo yohambo lwasehlotyeni ukuya elwandle. Le ndlu ikwindawo yokuphuma esixekweni, ikuvumela ukuba ufike elwandle ngeendlela apho unokunqanda ukuxinana kwezithuthi.
Kwabo bathanda ukuphumla okusebenzayo, ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5 - iGóra Chełmska eneendlela ezininzi zokubaleka kunye nebhayisekile, kunye neKoszalin Water Park - indawo yokuqubha eneziko lokuzilolonga kunye nejimu.
Indawo yokuhlala ifumaneka kwimizuzu emi-6 ukusuka kwizakhiwo zeYunivesithi yaseKoszalin yeTekhnoloji.
Kubaqhubi beemoto, indawo yokupaka yasimahla, engagadwanga, i-TAXI yokumisa phantsi kwesakhiwo kunye nezithuthi zikawonke-wonke.
4.91 · Izimvo eziyi-13
Umbuki zindwendwe ngu- Dominika
Sihlala eKoszalin, sifumaneka ngefowuni xa kukho naziphi na iingxaki. Sidibana neendwendwe xa sikhupha izitshixo. Xa uphuma, izitshixo zishiywe kwindawo ethile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koszalin